Archive du 20170419
Fifidianana 2018 Efa mipetrapetraka ny hala-bato ?
Tsy ankasitrahan�ny mpanohitra any Tiokia sy ny mpanara-maso avy amin�ny vondrona Eoropeanina ny vokatry ny fitsapankevi-bahoaka natao tany an-toerana ny alahady 16 aprily teo, ka nivoahan�ny �Eny� ho mpandresy tamin�ny alalan�ny isa 51,4%, izay voalaza fa feno hosoka.
Mpifidy voasoratra anarana Nitombo 6,38%
Navoakan�ny komisionina mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) omaly ny isan�ireo mpifidy voasoratra anarana hiatrika ny fifidianana amin�ny taona 2018.
Lylison sy Andriamandavy VII Horoahina tsy ho loholona ?
Ny 2 mey izao no hiroso amin�ny fivoriana ara-potoana ny mpikambana eo anivon�ny antenimierandoholona. Mandritra io fotoana io no handinihina ny raharaha Lylison, izay efa 8 volana mahery no miery noho ny fanenjehan�ny fanjakana HVM azy.
Misy mihaino ?
Manahoana ry Jean a ! Fa ianareo moa izany miandry inona mihitsy vao hiteny fa miandry izay haloaky ny vavanareo anie ny olona amin�ity raharaha Dinina be ity e ?
Mpangalatra jiro sy rano Tsy maintsy ho saziana
Fampitam-baovao navoakan�ny Jirama farany ny vokatry ny fidinana ifotony notontosain�ireo mpiasa mpanara-maso mpitsirika ny fanjifana herinaratra sy rano eny anivon�ny fiarahamonina Malagasy.
Rivodoza Enawo Nahery indrindra tao anatin�ny 13 taona
Maherin�ny 450 tapitrisa dolara ny tentim-bidim-pahasimbana nateraky ny rivodoza Enawo, izay nandalo teto amintsika farany teo, raha ny tombana savaranonando navoakan�ny banky iraisam-pirenena.
Fetin�ny Paska 2017 Tafakatra 12 ny maty
Tafakatra 12 ny isan�ireo olona namoy ny ainy manerana ny Nosy nandritra ny fankalazana ny fetin�ny Paska lasa teo.
Fotsialanana Soanierana Ivongo Atahorana ny fifamonoan�ny mponina
Nampisahotaka an�i Soanierana Ivongo manontolo ny namonoan�ny tompona lavanila nahatratra ambodiomby mpangalatra lavanila maitso teo amin�ny taniny ny 7 aprily lasa teo.
Ambohimanarina Niatrika sedra, nioty vokatra tsara
Niara-niombom-bavaka fisaorana an�Andriamanitra tao amin�ny Fiangonan�i Jesoa Kritsy eto Madagasikara Ambohimanandray
Loza mahatsiravina Notetezin�ny fiara ny lohan�ilay lehilahy
Nandriaka ny ra omaly talata 18 aprily tokony ho tamin'ny 12 ora sy sasany tany amin�ny lalam-pirenena faha-7 any Fianarantsoa.
Fanamboarana sarintany Hanamora fanisam-bahoaka, hoy ny INSTAT
Mpanao sarintany miisa 700 no hahetsiky ny ivontoeram-pirenena misahana ny fanisam-bahoaka (INSTAT) hanisa ireo mponina manomboka amin�ny oktobra izao, raha ny fanazavana voaray avy eo anivon�ity rafitra ity.
Ampanjaka eto Madagasikara Hanorina tranombakoka manerana ny nosy
Afa-po tamin�ny fampirantiana fampahafantarana ny kolontsaina sy ny vakoka Mahafaly teny amin�ny tranombokim-pirenena Ampefiloha ny FCRTM (F�d�ration des Communaut�s Royales Traditionnelles de Madagascar).